८ श्रीमती एउटा लोग्नेसँग खुशीसाथ बसेको यो परिवार, रात विताउने रोचकता खुल्दा झनै चकित !
March 25, 2022 AdminLeaveaComment on ८ श्रीमती एउटा लोग्नेसँग खुशीसाथ बसेको यो परिवार, रात विताउने रोचकता खुल्दा झनै चकित !
काठमाडौं । हाम्रो जीवनमा विवाहको आफ्नै महत्व रहेको छ । नेपालमा सामान्यतयाः एक व्यक्तिले एक विवाह गर्छ ।तर केहि व्यक्तिहरु दुई विवाह पनि गर्छन् । कतिपय मानिसले ३ वटा विवाह पनि गरेका हुन्छन् ।
तर आज हामी तपाईलाई एक त्यस्ता व्यक्तिको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ, जसले १–२ वा ३ वटा होइन ८ वटा विवाह गरेका छन् । उनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुँदैछन् । यो कुरा आफैमा रोचक छ, किनभने सबै पत्नीहरू सँगै बस्छन् । यो कथा निकै रोचक छ र सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।
ओडिटी सेन्ट्रल नामक वेबसाइटका अनुसार यो खबर थाइल्याण्डका एक व्यक्तिको हो । ति व्यक्तिको नाम ओङ ड्याम हो । ति व्यक्ति पेशाले ट्याटु आर्टिस्ट हुन् । उनी एउटै घरमा ८ जना श्रीमतीसँग बस्छन् । सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के हो भने उनी आफ्ना ८ सबै पत्नीहरूसँग मिलेर जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरु एक अर्का साथी जस्तै छन् ।
परिवारका आफ्नै सन्तान जस्तो मिलेर बसेका छन् । ओङ ड्याम एक प्रसिद्ध ट्याटू कलाकार हुन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा सधैँ सक्रिय रहन्छिन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनकी पहिलो पत्नीको नाम नोङ स्प्राइट हो । साथीको बिहेमा उनको भेट भएको थियो, दुबै पहिलो नजरमा प्रेममा परे र पछि बिहे गरेका हुन् ।
त्यस्तै दोस्रो श्रीमती नोङ एलको कथा पनि अलि फरक छ । दाम र नोङको भेट एक बजारमा भयो, त्यहाँ दुबै प्रेममा परे र त्यसपछि बिहेको कुरा भयो, तेस्रो श्रीमती नोङ नानको कुरा गर्दा दुबैको भेट अस्पतालमा भएको थियो ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा चौथो, पाँचौं र छैटौं श्रीमतीलाई भेटेको बताएका छन् । तीनै जनासँग कुराकानी गर्दा उनीहरु प्रेममा परे र त्यसपछि विवाह भयो ।
ओङ्गको सातौं श्रीमतीलाई मन्दिरमा भेटाएका थिए, जबकि आठौं श्रीमतीले सबै पत्नीहरूसँग छुट्टीको समयमा भेटेका हुन् । त्यहाँ उनीहरुको प्रेम भयो, त्यसपछि विवाह भयो । यति मात्र हैन उनीहरु एकसाथ रात विताउँछन् । कुनै संकोच छैन । कुनै लाज छैन । उनीहरु खुलेर एकसाथ श्रीमानसँग रात विताउने गरेको र त्यसबाट सबै सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।
श्रीमानलाई देखाउनकै लागि भएपनि अर्को बि’हे गर्न चाहन्छु म, कोही केटा छन् भने स’म्पर्क गर्नुहोस्
डि”भोर्सपछी कसैले आँ’खा लगाउदैनन्,,मलाइ रा”त मा एकदम ग*र्न मन लाग्छ ! के गँरु ?
Exclusive | दुर्गेश थापा पल प्रकरणपछि पहिलो पटक भावुक हुँदै मिडियामा पूरा भिडियो हेर्नुहोस|
वि र्य बजारमा किन्न पाइन्छ, अव पुरुषको काम छैन: सावित्रा सुवेदी (भिडियो सहित)
Exclusive: Paul Shah लाई फ’साईयो भन्दै गायिकाको नवलपुरमा बया’न? भनिन् पल निर्दो’ष छन् मलाई उ’क्साए..